လကျဖြားခါရတယျ – My Blog
“အဟငျး… အား… ကောငျးလိုကျတာ အောငျရယျ…. ဘယျလိုတှေ လုပျနတောလဲ” တိတျဆိတျသော ညနှငျ့ အခနျးငယျလေးထဲတှငျ ရမ်မကျ သံတို့ဖွငျ့ လှမျးခွုံနပေသေညျ ကိုအောငျတဈယောကျ သူမိနျးမ အငျကွငျးကို ကုတငျပျေါတှငျ ပေါငျနှဈခြောငျးဖွဲပွီး အားရပါးရနှငျ့ကို စိတျလိုလကျရမှုတျပေးနပေသေညျ လိငျစိတျကွီးသူမြားပီပီ အရှယျမှာလညျး နှဈဆယျငါးပတျဝနျးကငျြ သာဖွဈကွသောကွောငျ့ ကာမအားအကောငျးဆုံး အရှယျလညျး ဖွဈကွလသေညျ ကိုအောငျသညျ ဝါရငျ့ဘာဂြာ သမားပီပီ အမှုတျမှာတော့ စံထားရလောကျပသေညျ ထို့အပွငျ အလငျးရောငျအောကျတှငျ အငျကွငျးရဲ့ ပွောငျရှငျးနသေော စောကျဖုတျ ဖောငျးဖောငျး ကွီးကလညျး ကိုအောငျရဲ့ အာရုံတှကေို နှိုးဆှနပေသေညျ ” အား… ရှိ” အစကေို့ ရခေဲခြောငျး စှဲသလို စှဲစုတျလိုကျ အကှဲကွောငျးကို လြှာဖွငျ့ ကစားလိုကျ နှငျ့ ဒီကွားထဲ စောကျဖုတျထဲကို လကျခြောငျးထိုးထညျ့ပွီး ဖငျပေါကျကို ပါ ယကျပေးလိုကျသောအခါ
” အမလေး….. အား… ကောငျးလိုကျတာ အောငျရယျ” ဟုငွီးငွူရသညျအထိပငျ ကိုအောငျသညျ သူမိနျးမအကွောငျး သူသိသညျ ကာမအရသာကို တငျးပွညျ့ကွပျပွညျ့ခံစားသညျ ထို့ကွောငျ့ လငျမယား နှဈဦးတညျး လှတျလှတျလပျလပျနနေိုငျအောငျ တဈအိုးတဈအိမျထူထောငျခဲ့ကွပသေညျ ယခုလညျး အိမျထဲမှာ အသံပေါငျးစုံကို စုံနသေညျ စောကျဖုတျထဲက ထုတျလိုကျသော လကျနှဈခြောငျးကို သူမိနျးမဆီသို့ ထိုးပေးလိုကျသော အခါ အငျကွငျးမှာ အငမျးမရ လကျခြောငျးမြားကို လီးစုတျသလို ပွောငျအောငျ စုတျပေးလိုကျသညျ “အောငျအရှိနျမလြှော့နဲ့တော့ အငျကွငျးပွီးတော့မယျ” ” ပွီးပွီ အား ပွီးပွီ…. သောကျလိုကျ အောငျရေ စောကျရတှေကေို ကုနျအောငျသောကျပေး” ကိုအောငျတဈယောကျ ပါးစပျကို စောကျဖုတျနဲ့ ကပျနိုငျသမြှ ကပျပွီး ထှကျသမြှ အရညျတှကေို တဈစကျမကနျြ စုတျယူမွိုခလြိုကျလသေညျ ” အား… ကောငျးလားမောငျ” ” ကဲ… မောငျတော့ အားဆေးသောကျပွီး သှားပွီ” ကိုအောငျရဲ့ လီးကွီးမှာ ဒုံးပြံအလား ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျ ထောငျမတျနပေသေညျ။
” ဟငျး… ဒါပဲသှား…. စောကျရညျဝငျတာနဲ့ သူဟာကွီးက ကွောကျစရာကွီး…” ပွောလညျး ပွောရငျး အငျကွငျးတဈယောကျ ကိုအောငျကို တှနျးထုတျရငျး ပကျလကျလှနျစကော စောကျဖုတျကို ဖွဲပွီး ထိုငျခလြိုကျသညျ ” အား.. ကြှတျကြှတျ” ဒီတဈခါတော့ နှဈယောကျသား ပွိုငျတူအျောမိတာပါ ” ဖတျ… ဖတျ” အငျကွငျးလညျး ကိုအောငျလကျနှဈဖကျကို နို့နှဈလုံးကို ကိုငျစကော အားရပါးရ ကိုကိုငျ စောငျ့နတေော့သညျ စောကျပတျမှာလညျး စောကျရတှေနေဲ့ အတူတူ အဝငျအထှကျလညျး တျောတျောခြောမှနေ့ပွေီး အသံတှလေညျး ဆူညံနပေသေညျ ကိုအောငျ့ဘကျကို မကျြနှာမူပွီး ကော့ကာကော့ကာ ဆောငျ့ပေးနခွေငျးကွောငျ့ စောကျဖုတျကွီးနှငျ့ နို့ကွီးနှဈဖကျမှာလညျး ကိုအောငျရဲ့ကာမသှေးတို့ကို နိုးကွှစလေသေညျ ” အား…. အား ” ရုတျတရကျ အရှိနျရလာပွီးသောအခါ အငျကွငျးတဈယောကျ လီးကို စောကျဖုတျမှ ခြှတျရငျး ဖငျဝကို ပွောငျးတလေို့ကျလသေညျ
ကိုအောငျတဈယောကျ သူမိနျးမကို အဲလောကျနှာထလိမျ.မယျလို့ တဈခါမှမတှေးခဲ့ဘူးပါ ညားခါစတဈလ လောကျထိက ဘာဆို ဘာမှမသိ နောကျပိုငျး သူကိုတိုငျပငျ သူမိနျးမကို အပွာကားတှေ ကွညျ့စေ လကျတှလေု့ပျကွညျ့စပွေီး နောကျမှစလို့ အငျကွငျးတဈယောကျ စကေးတကျလာခကျြက နောကျဆုံး ဆရာထကျ သားတဈလ ကွီးသှားတဲ့ အထိပေ ယခုလညျး ကွညျ့ ကိုအောငျရဲ့ တံတှေးတှနေဲ့ စိုရှဲနတေဲ့ ဖငျကွားထဲကို လီးကိုထောကျပွီး အားရပါးရ ထိုငျခပြွီး ကညော့နပေသေညျ ” အား… ကိုအောငျ အဲမှာလီးဇိမျခံမနနေဲ့ နို့ကိုပှတျပေးဦး” ဆိုပွီး အားယားပါးရဆောငျ့နေ တကယျတော့ အငျကွငျးတဈယောကျလညျး ဖငျခံဖူးတဲ့ အခြိနျကစလို့ ညတိုငျး ဖငျမခံရရငျ မနနေိုငျရတော့တဲ့ အထိပေ အရှိနျရလာတော့ ကိုအောငျကော အငျကွငျးကော ပွီးလုပွီးခငျဖွဈလာသညျ
ကိုအောငျတဈယောကျလညျး အငျကွငျးဖငျက ဆှဲညဈထားလို့ အရမျးပွီးခငျြခငျြဖွဈလာသဖွငျ့ တောငျတှေး မွောကျတှေး နို့ကို အားရုံလှဲလိုကျ အသကျရှုသံ မှတျလိုကျနှငျ့ အာရုံလှဲနရေသညျ “ကိုအောငျ… မကေို့ ဒေါဂီ ဆှဲပေးဦး” ကိုအောငျလညျး လီးကိုဖငျမှဆှဲ ထုတျ အသကျကိုဝအောငျရှုပွီး အငျကွငျးကို ခါးကုနျးစကော နောကျမှနရောဝငျယူပွီး ” ဘယျကိုသှငျးရမလဲ… ဖငျလား အဖုတျလား” ” အဖုတျကိုပဲ သှငျးတော့ အောငျ ရှငျ့လီးက ကွီးကကွီးနဲ့ ဖငျက ဒီလောကျဆို တျောလောကျပွီ”။
ကိုအောငျ တဈယောကျ စောကျဖုတျထဲထညျ့… စိမျပွီး မှေ… အားနဲ့ဆောငျ့လိုးပဈလိုကျသညျ ” အား… ကောငျးလိုကျတာ… အား” အငျကွငျးက လညျပွနျနမျးခငျြလာတာကွောငျ့ ဇကျကို လှညျ့လိုကျပွီး ကိုအောငျနှငျ့ နှုတျခမျးခငျြး နမျးရှုံ.လိုကျသညျ ကိုအောငျလညျး အားနဲ့ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနရေငျး အငျကွငျးတဈယောကျပွီးခငျြလာသညျ ” ကိုအောငျ ထိနျးထား….. အငျကွငျးပွီးပွီ” အျောရငျးနှငျ့ပငျ အငျကွငျးတဈယောကျ တဈကိုယျလုံး တုနျတကျပွီး ပွီးသှားပေးသညျ ” အား….. ကောငျးလိုကျတာ ကိုအောငျရယျ ကဲကိုအောငျပွီးခါနီးရငျ ပွောနျော မိနျးမဘယျလိုပွီးစခေငျြတာ သိတယျမလား” သိပျသိတာပေါ့…. ကိုအောငျတဈယောကျ …. ဒီအကှကျကို ဂပြနျကားတှကေို ကွညျ့ပွီး သူမိနျးမကို သငျပေးထားခွငျးဖွဈပသေညျ
စစခငျြးတော့ တျောတျော သငျလိုကျရပမေဲ့ နောကျတော့ သူမိနျးမအကွိုကျဖွဈသှားပသေညျ “ကဲ… မိနျးမရေ ကိုပွီးပွီ” ဆိုပွီး စောကျဖုတျထဲက ဆှဲထုတျလိုကျပသေညျ အငျကွငျးလညျး ကုတငျဘေးက စားပှဲပျေါမှာတငျထားသညျ့ ကိုအောငျသောကျလကျစ ဖနျခှကျထဲက အရကျကို အကုနျမော့ခလြိုကျပွီး မွနျမွနျလေး ဒူးထောကျလိုကျပွီး ကိုအောငျလီးဒဈနားမှာ ခှကျကို ထားပီး လြှာလေးတဈကာ ကိုအောငျကို မော့ကွညျ့နပေသေညျ ကိုအောငျလညျး လီးကိုခပျသှကျသှကျလေးထုလိုကျပွီး ” အား… အား.. မိနျးမရေ ခံထားတော့”အျောလိုကျကာ လရညျတှကေို အရကျခှကျထဲသို့ ပနျးထညျ့လိုကျသညျ ကိုအောငျကွီး ကွီးမားလှသော လီးကွီးမှ လရညျမြား ထှကျလာပုံမှာ
မီးတောငျမှ ခြျောရညျမြားပနျးထှကျလာသညျ့နှယျ လရညျမြားကလညျး ကိုအောငျရဲ့ ကွီးမားလှသော လီးနဲ့ညီမြှလှအောငျ မြားပွားလှနျးလှပေးသညျ ” အား.. ” ကိုအောငျတဈယောကျ ဒူးမြားပငျ ယိုငျခငျြသလိုတောငျ ဖွဈသှားပသေညျ အငျကွငျးကတော့ သူလိုခငျြတာရတဲ့ ခလေးတဈယောကျလို ပြျောမွူးနပေသေညျ လီးမှ တှဲကနြသေော လီးရညျတဈစကျ နှဈစကျကို နှမွောသညျ့အလား ခှကျစောငျးပျေါ လီးကိုကိုငျပွီး ရိုကျရိုကျခပြေးနသေညျ ထို့နောကျ ” ဒီမှာ ကွညျ့စမျး… ကိုအောငျ” ဆိုပွီး ဖနျခှကျထဲက လီးရညျကို အရငျလြှာနှငျ့တို့ပွသညျ လကျညိုးနှငျ့ယူပွီး ပါးစပျထဲထညျ့က ပူပေါငျးလုပျကာစော့ပွသညျ။
အားရတော့မှ ဒီမှာ ဆိုပွီး ဖနျခှကျကို တခေ့ါ တဈကွိုကျတညျး လီးရညျမြားကို ပါးစပျထဲထညျ့လိုကျပွီး ခကျြခငျြး မွိုမခသြေး ငုံထားပွီး ကိုအောငျအား ပါးစပျဟပွသညျ ထို့နောကျ “ဂလု” ဟုအသံပွုကာ မကျမကျမောမော မွိုခလြိုကျသညျ ” အား….. ကောငျးလိုကျတာ ကိုအောငျရယျ အရသာရှိသှားတာပဲ ဒါပမေဲ့ ကိုအောငျလီးရညျတှေ နညျးနညျးငွီနတေယျ အခြိုအရသာပျေါအောငျ နောကျနကြေ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြားမြားခကျြကြှေးရမယျ” ဟုပွောနရေငျး ခှကျထဲမှ လကျကနျြလီးရညျမြားကို လကျညိုးဖွငျ့ နှိုကျကာ ပါးစပျထဲအရသာခံထညျ့နသေညျ ကိုအောငျလညျး ဒီလိုစိတျကွိုကျကုနျးပေးတဲ့ ဇနီးခြောလေးကို ခဈြမိရတာ အခါခါပငျ ” အေးပါ မိနျးမရယျ နောကျနကြေ့ လီးရညျခြိုအောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ပိုစားပါမယျ ဒါပမေဲ့ နောကျတဈခေါကျတှကြေ စောကျဖုတျထဲမှာ ပွီးကွရအောငျကှာ ကိုတို့လညျး ကလေးယူကွရအောငျ”
” အို…. ကိုကလဲ အငျကွငျးမယူခငျြသေးပါဘူး အငျကွငျးcompany ကလညျး အခုမှအရှိနျယူစပဲ ရှိသေးတယျ အလုပျတဈဖကျနဲ့ဆို ကလေးကို ကောငျးကောငျးလဲ ကွညျ့နိုငျမှာ မဟုတျဘူး ပွီးတော့ အငျကွငျးလညျး တဈရကျတဈရကျမှ လီးရညျအရသာမခံရရငျ တဈခုခုလိုနသေလို အားမရှိသလိုလိုနဲ့ ကိုအောငျနျော လူကို သူပဲလီးရညျစှဲအောငျ လုပျထားပွီးတော့ ခုမှလီးရညျဖကျြခိုငျးနတေယျ…. သှား…. နောကျတဈခါ သုတျရညျပေးမသောကျရငျ လာမလိုးနဲ့” ဆိုပွီး မကျြစောငျးထိုးကာ ကလေးတဈယောကျလို နှဲ့ဆိုးဆိုးပွနပေသေညျ
“ကဲပါ… မိနျးမရယျ… မငျးသဘောပါ…. မငျးမကွိုကျရငျ နောကျမပွောတော့ မလုပျတော့ပါဘူး စိတျဆိုးပွတေော့နျော” ဟုခြော့ပွီး ခဈြဇနီးကို ဆှဲလှညျ့ကာ တငျးတငျးကွပျကွပျ ဖကျထားလိုကျလတေော့သညျ “ဟကေ့ောငျ မငျးဘာတှဖွေဈနတောလဲ” ကိုအောငျမှကိုဇျောကိုမေးလိုကျလသေညျ ကိုဇျောနှငျ့ ကိုအောငျသညျUni ထဲက same batch သူငယျခငျြးမြားဖွဈကွလသေညျ GTU မှပွီးကွသူမြားဖွဈပွီး company တဈခုတညျးတှငျ အတူတူဝငျလြှောကျ အတူတူအလုပျရပွီး ဆောကျလုပျရေးengineer မြားအဖွဈ အသကျမှေးနကွေလသေညျ။
သူတို့နှဈဦးမှာ ညီအဈကို ကဲ့သို့ပငျ တဈပူးပူး တဈတှဲတှဲ နှငျ့ သံယောဇဉျကွီးကွပသေညျ မတူတာ တဈခကျြပဲ ရှိသညျ ကိုဇျောမှာ ယခုထကျထိ မိနျးမမရသေးသော လူပြိုကွီးတဈယောကျဖွဈသညျ အလုပျပွီးသေးလြှငျ အိမျတနျး မပွနျကွပဲ နတေို့ငျးနီးပါး ဘီယာ ဆိုငျ အရကျဆိုငျ ထိုငျပွီး ထှရောလေးပါ ပေါကျတကျကရ အထူးသဖွငျ့ လိငျအကွောငျး စကားစမွညျပွောတကျကွလသေညျ အခငျြးခငျြးရှိတာလေးတှေ မြှဝပွေီး zapya နဲ့ထိုငျကူး ထိုငျshare တကျကွသညျ ယနေ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး သူငယျခငျြးတဈယောကျ မကျြနှာညိုးသညျကို ကိုအောငျ သတိထားမိလသေညျ ” သားကွီး ဒီလိုကှာ…… ငါကှာ ငါဒီတဈသကျ အိမျထောငျရေးကံပါမယျမထငျဘူးကှာ” “ဘယျလိုဖွဈရတာလဲကှ… မငျးခြိနျနတေဲ့ မနှေငျးကကော… ဘယျလိုဖွဈသှားလို့လဲ”
“အဆငျမပွဘေူးကှာ….. သူငယျခငျြး.. ငါ့ကိုမခဈြနိုငျဘူးတဲ့… အဓိကကတော့ ကောငျမလေးက ငါ့ထကျ အသကျငယျနတေယျကှာ… ငါမှားသှားတယျ…သားကွီးရာ ကြောငျးတုနျးကလညျး…. ဘဝကငျြဖျောမရှာပဲ စာမှစာပဲ လုပျခဲ့ …. အလုပျထဲရောကျတော့လညျး….. ပိုကျဆံပဲ ကုနျးရုံးရှာ…. သူငယျခငျြးတှေ မိနျးမရတော့မှပဲ…. သှေးသားက တောငျ့တလိုခငျြလာ… တဈခါတဈလတေော့လညျး ကာမအရသာကို ဘဝမှာ တငျးပွညျ့ကွပျပွညျ့ခံစားခငျြတယျကှာ…..ဖာခတြော့လညျး မသနျ့တော့ မမှုတျရဲ အစှပျလေးနဲ့ခရြတာလညျး ကွာတော့ ဖီး မလာခငျြတော့… အဲလိုကွီးနဲ့ ဘဝဆုံးသှားမှာလညျး ဆိုးကှာ တဈကွိမျတဈခါလောကျ ဘဝမှာ ကာမအရသာကို စိတျကူးရှိသလို စိတျလှတျလကျလှတျ ခံစားလိုကျခငျြတယျကှာ” ဆိုပွီး ကိုဇျောတဈယောကျ ရပေငျမရောတော့ အရကျကို တဈကွိုကျတညျးမော့ခလြိုကျလတေော့သညျ။
ကိုအောငျစိတျထဲတှငျတော့” ငါ့သူငယျခငျြးကို ဘယျလိုလုပျပေးရမလဲ ဆိုတာသာ စိတျထဲတှေးနပေတေော့သညျ။””အား… ပွီးပွီ မိနျးမ” ထုံးစံအတိုငျး ပွီးခါနီးတော့ အငျကွငျးတဈယောကျ ဒူးထောကျ လြှာလေးထုတျပွီး သူအတှကျ ဆုလာဒျကို စောငျ့မြှျောနပေသေညျ ” အား” ကိုအောငျတဈယောကျ လြှာပျေါကို လရညျတှအေဖှေးသား ဂှေးထုခပြေးလိုကျပွီး မကျြနှာပျေါကိုလညျး ခပျစပျစပျလေး လီးနှငျ့ရိုကျလိုကျသညျ အငျကွငျးတဈယောကျ လီးရညျအားလုံးကို မမွိုခသြေးပဲ ပါးစပျဟပွလိုကျ အရသာခံပွလိုကျ လုပျနပွေီးမှ လီးရညျကို မွိုခလြိုကျပွီး မကျြနှာပျေါတှငျပနေသေော လီးရညျမြားကို လကျညိုးနှငျ့ သုတျလိုကျပွီး ပါးစပျထဲထညျ့ရကျလိုကျသညျ “ကောငျးလားမိနျးမ” “အငျး… အရသာရှိတယျ… ခြိုနတောပဲ… ဒီတဈခေါကျတော့” ” မိနျးမ… တဈခွားလူတဈယောကျနဲ့ လိုးခငျြလား” “ဘာ… ဘယျလို ဘာပွောလိုကျတာ”
” ဪ….. ကိုမဟုတျတဲ့ တဈခွားလူနဲ့လိုးခငျြလား ကိုကို့ရိုးသှားနပွေီလား” “ရှငျ… ကြှနျမကို ဘယျလိုအစားထဲက မှတျနလေို့လဲ ကိုအောငျ ကြှနျမဘာသာ ကြှနျမ ခငျပှနျးနဲ့ အပေါကျစုံအောငျ ခံမယျ အဲလောကျတော့ နှာမထဘူး ကွညျ့ရတာ ရှငျကြှနျမကို သံသယ ဝငျနတောလား” “အဲလိုမဟုတျဘူးကှ…..ကိုဆိုလိုရငျးက….. ကို့သူငယျခငျြး ကိုဇျောကှာ…. ဒီကောငျ အခုထကျထိ မိနျးမကလညျး မရသေး ဖာခဖြို့ကတြော့လညျး အေ ကွောကျကာမအရသာကို ဘာမှနျးကောငျးကောငျးကွီး မသိသေးဘူးကှာ ကိုခငျြးစာတယျ အဈကို အဲဒါသူကို မိနျးမနဲ့ အတူနေ….”
” တျောတော့ ကိုအောငျ ရှငျကြှနျမကို ဖာသညျမြား မှတျနလေား… ရှငျဘယျလိုလောကျထိ ကို့မိနျးမကို သူမြားနဲ့ပေးနဖေို့ တှေးရဲရတာလဲ… တျောတော့ ရှငျဆကျမပွောနဲ့တော့…. ဒီညတော့ ရှငျကွိုကျတဲ့နရောမှာ သှားအိပျ ကြှနျမနဲ့လာမအိပျနဲ့” ဆိုပွီး ကိုအောငျကို လီးတနျးလနျးကွီးနဲ့ အခနျးအပွငျကို တှနျးထုတျ တံခါးကို ဆောငျ့ပွီး ပိတျ ဆိုဖာ ပျေါမှာဒီညတော့ အိပျရုံကလှဲလို့ မတတျနိုငျတော့ အငျကွငျးသညျ Diamond Company မှာ GM အဖွဈ တာဝနျ ထမျးဆောငျနသေညျ။
တကယျတော့ အငျကွငျးသညျ ခမျြးသာသော မိသားစုမှ ဆငျးသကျလာသောကွောငျ့ ယခုလညျး ဖခငျပိုငျသော company မှာသာ ဝငျရောကျအလုပျလုပျကိုငျနခွေငျး ဖွဈပသေညျ ယခုလညျး အလုပျပါးသောကွောငျ့ အလုပျတှငျ ပငျြးပငျြးရှိသညျနှငျ့ ဖုနျးကိုထုတျလိုကျပွီး fb profile change မညျဟုကွံကာ gallery ထဲသို့အသှား အပွာကား အသဈမြားကို တှလေို့ကျသဖွငျ့ မကျြလုံးပွူးသှားသညျ “အငျး… ကိုနိုငျတဈယောကျလကျခကျြပဲ နမှောပါပဲ” မနညေ့က စကားကတောကျကဆ မြားထားသဖွငျ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျစကားမပွောပဲ အလုပျထှကျလာကွပွီး သူမသိသော အခြိနျ ကိုနိုငျတဈယောကျ ထညျ့လိုကျပုံရသညျ ရုံးခနျးထဲမှာ တဈယောကျတညျးလညျးရှိနသေောကွောငျ့
စိတျလုံအောငျ ဘေးဘီဝဲယာကို တဈခကျြကွညျ့လိုကျပွီး အငျကွငျးတဈယောကျ အောဇတျကား မြားကို ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ ကားမြားမှာ ဇာတျလမျးသှားလေးမြား ဖွဈပွီး အဓိကကတော့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ မိနျးမဖလယျလိုး နှငျ့ သူငယျခငျြးမိနျးမကို ပွိုငျတူခကြွတာခညျြးတှဖွေဈနသေညျ အငျကွငျးလညျး စိတျပါလာပွီး အဆုံးထိထိုငျကွညျ့ဖွဈရငျး ဆီယူကလောကျ ဆိုသော စာတနျးလေးမြားကိုတှပွေီ့း internet မှာခကျြခငျြးရှာကာ ရုပျရှငျမြား down လိုကျလသေညျ ထို့နောကျ မထိနျးနိုငျတော့သညျ
အဆုံး အိမျသာဘကျသို့ ထှကျသှားပွီး အဖုတျကို အားရပှတျပွီး စောကျရညျထှကျမှပဲ ပွီးသှားတော့ပသေညျ.. ပွနျရောကျတော့ အငျကွငျးတဈယောကျ ကိုအောငျနှငျ့ စကားမပွော အခနျးထဲဝငျပွီး ကလောကျအိုး အကွောငျး internet အပျေါမှာ စူးစမျးလိုကျရှာကွညျ့သညျ လြှောကျဖတျကွညျ့လိုကျသောအခါ ကလောကျဆိုသညျမှာ သူထငျထားသကဲ့သို့ မဟုတျပဲ အိမျထောငျရေးပွသနာအမြားစု မဖွဈအောငျ ဖွရှေငျးသော အရာမှနျးနားလညျလာသညျ။
အိမျထောငျရေးပွိုကှဲစသေညျ့ အရာမဟုတျပဲ အိမျထောငျရေးကို ပိုခိုငျမွဲစသေညျ့ အရာမှနျး ပိုသဘောပေါကျလာသညျ အိမျထောငျကပြွီးကတညျးက ယခုအခြိနျထိ ခငျပှနျးနှငျ့သာ အတူတူနဖေူးသော မိမိမှာလညျး အခွားအတှအေ့ကွုံ အသဈအဆနျးမြား လိုခငျြသော လိုအငျမြားလညျး တဖှားဖှားဖွဈပျေါလာလသေညျ ………. ” ကိုအောငျ” ” ပွောလေ… အငျကွငျး ကိုကို့ စိတျဆိုးနတေုနျးပဲလား” ” ရှငျ့သူငယျခငျြးက သနျ့လို့လား” “မိနျးမ မငျးဘာပွောလိုကျတယျ” “မေးနတော… ရှငျ့သူငယျခငျြးက သနျ့လို့လား” “သနျ့တာမှာ ရတေောငျဆေးစရာမလိုဘူး… ဒါဆို မငျးသဘောတူလိုကျပွီပေါ့” “သှားပါ…… ကို့မိနျးမကို တနျဖိုးမထားတဲ့လူ…… ကဲ… ကြှနျမကို အားဆေးတိုကျဦး… မသောကျရတာ သုံးရကျတောငျ ရှိပွီ”
” အငျးပေါ့…. မိနျးမရာ တိုကျရမှာပေါ့”ဆိုပွီး ဘောငျးဘီဆှဲခြှတျပွီး လီးကို အငျကွငျးမကျြနှာနားကို တိုးပေးလိုကျလတေော့သညျ……. ဒီနေ့ အငျကွငျးတဈယောကျ အလှဆုံး ပွငျထားသညျ အတှအေ့ကွုံအသငျ့အတှကျရငျတှလေညျး ခုနျနသေညျ စောကျဖုတျကိုလညျး သသေခြောခြာရဆေေး အမှေးရိတျပွီး အကွိမျကွိမျအခါခါ မှနျထဲမှာပွနျကွညျ့ပွီး ဆကျဆီ ကအြောငျ စကတျအတိုလေးနှငျ့ လညျဟိုကျဝတျပွီး ဆိုဖာ ပျေါမှာ ထိုငျစောငျ့နပေသေညျ စကတျမှာလညျး စောကျပတျမပျေါရုံတမယျပငျအောကျတှငျပငျတီ ဝတျမထား နို့ကွီးနှဈလုံးမှာလညျး ဘျောလီမဝတျထှားသဖွငျ့ ကွညျ့ရသူအပေါငျး အမွငျနှငျ့တငျ တဈခြီပွီးသှားနိုငျပသေညျ
ထိုအခြိနျတှငျ ခွံရှမှေ့ာ ကားသံကွားရ သညျနှငျ့ ဝမျးသာသှားသညျ ကိုဇျောနှငျ့ ကိုအောငျတို့ရောကျလာကွပွီပဲ တကယျတော့ ကိုဇျောနှငျ့ အငျကွငျးသညျ အစိမျးသကျသကျမဟုတျပေ ကိုဇျောသညျ ကိုအောငျအရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြး ဖွဈသညျ့အတှကျ အိမျကိုတော့ ခဏခဏ လာဖူးနသေညျ ယခုလိုမြိုး အခွအေနတှေငျတော့ ကိုဇျောကော အငျကွငျးကော စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးနမေညျမှာ အသအေခြာပဲ ဖွဈသညျ။
အိမျရှထှေ့ကျပွီး ထှကျကွိုလိုကျတော့ ကိုဇျောရဲ့မကျြလုံးတှကေ ကြှတျကွမတတျပငျ ဧညျ့ခနျးထဲကို ချေါသှားပွီး အရကျဝိုငျးနှငျ့ အမွညျးပွငျပေးထားသော စားပှဲဘေးနားရှိ ဆိုဖာ ပျေါမှာ အသီးသီးနရောယူလိုကျကွသညျ ကိုအောငျက” အငျကွငျးရေ အဈကိုဘဲကငျလေးပါ ဝယျလာတယျ ဒါလေးလညျး ပွငျပေးလိုကျပါဦး” ” ဟုတျကဲ့အဈကို” ဆိုပွီး အငျကွငျးတဈယောကျ kitchen ဘကျကို လှညျ့ထှကျသှားပါတယျ အဲအခြိနျမှာ ကိုဇျောတဈယောကျ “ဟကေ့ောငျ မငျးမိနျးမက ဖွဈပါ့မလား” ဟုဆိုရာ ကိုအောငျက “ငါကတောငျ ရပါတယျ ဆိုနေ မငျးကဘာဖွဈနတောလညျး ယောကျြားမဟုတျသလိုပဲ” ဟုငေါကျလိုကျတော့မှ ငွိမျကသြှားသညျ
ထို့နောကျ ကိုအောငျလညျး ဧညျ့ခနျးထဲရှိ TV ကိုဖှငျ့လိုကျပွီး ညကdown ထားသော ဇာတျကားတဈကားကို စဖှငျ့လိုကျသညျ ထိုအခြိနျတှငျ အငျကွငျးလညျး ပွနျရောကျလာပွီး ” ဟှနျး… ကိုအောငျတော့မြား လောလိုကျတာ အေးအေးဆေးဆေးနားပါစဦေးလား ဧညျ့သညျကို အားနာစရာကွီး” “အားနာစရာမလိုဘူး ဧညျ့သညျက အဲလိုကို မစောငျ့ခငျြတော့ဘူး” ပွောပွီး မိနျးမကိုပှတျသီးပှတျသပျ လုပျပွနလေတေော့သညျ
“ဟကေ့ောငျလာပါဟ ကြောကျရုပျကွီးလို ငူမနပေါနဲ့” လို့ပွောပွီးကိုအောငျက လှမျးအပွော အငျကွငျးကတော့ ကာမဆိပျတကျနသေော မကျြလုံးမြားဖွငျ့ ကိုဇျောကို စူးစိုကျကွညျ့နသေညျ ကိုဇျောလညျး မရဲတရဲသှားပူးပေါငျးပွီး ကိုအောငျနဲ့အတူ အပျေါပိုငျး လညျဟိုကျကို စှဲခြှတျလိုကျလသေညျ “မိနျးမ လကျမွှောကျထားစမျး” သိနတေယျလေ အငျကွငျးကောငျးကောငျး သိတာပေါ့ ယောကျြားတှဘောကွိုကျတတျမှနျး ဒါကွောငျ့ ဂြိုငျးကို အပတျတိုငျး ပေါငျးသှားတငျပွီ အမွဲတမျး ဖှေးနအေောငျ ထားတာပေါ့ လကျမွှောကျထားပေးတဲ့အခြိနျ ကိုအောငျရော ကိုဇျောရော ဂြိုငျးကို လြှာနဲ့အငမျးမရ ယကျကပြါလရေော။
ရှိနျနတေဲ့ ကိုဇျောလညျး တဖွေးဖွေးနဲ့ ရဲတငျးစ ပွုလာသလို အငျကွငျးခံစားလာရတယျ “ပလပျ.. ပလပျ” ” အငျး…..” ကောငျးလိုကျတဲ့ ဖီလငျ အငျကွငျးတဈယောကျ ကြားနှဈယောကျနဲ့ အဲလိုခံစားလိုကျရတော့ ပွီးခငျြသလိုတောငျ ဖွဈသှားတယျ ကိုအောငျတဈယောကျ စကပျ ကိုခြှတျမလို့အလုပျ “မခြှတျနဲ့ကိုအောငျ”ဆိုပွီး ပေါငျကားပေးလိုကျတော့ စကပျ ကွားထဲကနေ စောကျဖောကျကွီး ပွူးနအေောငျ ထှကျလာလသေညျ “Wow လှလိုကျတဲ့ စောကျပတျ” ကိုဇျောတဈယောကျ ကနျ့သတျခကျြတှကေို လုံးဝကို ခြိုးဖကျြပဈလိုကျတော့သညျ
” အငျကွငျး… အဲစောကျပတျ ကိုဇျောကိုပေးယကျကှာ” ဆိုပွီး ပကျလကျလှနျခလြိုကျတော့ အငျကွငျးတဈယောကျ သူမကျြနှာပျေါတကျခှပွီး ကိုအောငျကို တဈဖကျက လီးစုပျပေးနလေိုကျသညျ အငျကွငျးတဈယောကျ အကောငျးကွီးကောငျးနလေသေညျ ” အငျကွငျး… ပွီးအောငျပှတျနျော ကိုဇျောစောကျရညျသောကျခငျြလို့” Ok လေ ကွိုကျပွီပေါ့ အငျကွငျးတို့ နဂိုကတညျးကမှ အကောငျးကွီး ကောငျးနတေဲ့ အငျကွငျးတဈယောကျ သိပျမကွာခငျမှာပဲ အခြီကွီးပွီးသှားလသေညျ စောကျရညျမှာလညျး တာတမနျ ကလှတျလိုကျတဲ့ ရတှေအေလား
ကိုဇျောပါးစပျထဲကို တရဟော ကသြှားလသေညျ ကိုဇျောကလညျး တဈစကျမှ အလအေလှငျ့မရှိစခေငျြသညျ့ အလား အကုနျလုံးကို မွိုခရြငျး နောကျဆုံးအလုတျကို ပါးစောငျထဲထညျ့ အရသာခံပွီးတော့မှ ဖွေးဖွေးခငျြး မြိုခလြိုကျလသေညျ အငျကွငျးလညျး ပါးစပျထဲမှာလီးကိုခြှတျပွီး “ကောငျးလား… ကိုဇျော” “ကောငျးလိုကျတာ ဘီယာ နဲ့တောငျမလဲနိုငျဘူး စောကျရညျကို အခုမှ ပထမဦးဆုံးသောကျဖူးတာ ကဲကို့ကိုလညျး လီးစုပျပေးပါဦး” “အငျး… ” ဆိုပွီး အငျကွငျးတဈယောကျ ကိုဇျောရှေ့ ဒူးထောကျပွီး လီးကိုကုနျးမှုတျပေးနတေုနျး နောကျက ကိုအောငျက တငျနှဈဖကျကိုကိုငျပွီး စောငျ့လိုးနပေတေော့သညျ။
” အား…” ကိုဇျောတဈယောကျလညျး အငျကွငျးခေါငျးကို ကိုငျပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျပွီး အကောငျးကွီးကောငျးနပေတေော့သညျ အငျကွငျးလညျး ပါးစပျကနတေောငျ မအျောအား လီးနဲ့ပါးစပျမှာအစို့ခံထားရပွီး ကိုအောငျကလညျး နောကျမှ သားအိမျထောကျလောကျအောငျ သညျးကွီးမညျးကွီး စောငျ့ထညျ့နသေညျ “အား… ကောငျးတယျကှာ…. ပွီးသှားလိမျ.မယျ ဒီအတိုငျးဆို ပါးစပျထဲမှာ” “ပွီးလိုကျ ကိုဇျော ကိုဇျော ပါးစပျထဲမပွီးတောငျ စိတျဆိုးမှာ အငျကွငျးက လီးရညျသောကျခငျြတာ” ” ဪ… ကွိုကျသှားပွီ ပွီးမှာတိုကျမယျ ကိုဇျောအရငျလိုးပါရစဦေး” ဆိုပွီး အငျကွငျးဖငျနောကျကိုသှားပွီး ကိုအောငျကို အငျကွငျးအောကျဝငျစပွေီး လီးကိုစောကျပတျထဲထညျ့ပွီး သူကိုတိုငျက လီးကို ဖငျကွားထဲထညျ့ပွီး ညောငျ့နလေရေဲ့
“အား….” ကောငျးလိုကျတဲ့ ဖီလငျ ရုပျရှငျတှထေဲမှာပဲ မွငျဘူးသလောကျ အပွငျမှာ တယျကောငျးတဲ့ ဖီလငျ မြိုးပါလား ကြားနှဈယောကျ ညပျခတြာလောကျ ကောငျးတာမရှိတော့ တဈယောကျကဖငျကိုလိုး တဈယောကျက စောကျဖုတျကိုလိုး တငျးပွညျ့ကွပျပွညျ့နဲ့ ကောငျးလှနျးလို့ စိတျရှိလကျရှိ အငျကွငျးတဈယောကျအျောမိသညျ သုံးယောကျသား ခြှေးတှတေဒီးဒီးကွအောငျ ကာမအရသာခံစားပွီး ကိုအောငျက ပိုဇရှေငျ ပွောငျးမညျဆိုသဖွငျ့ အငျကွငျးကို စောငျ့စောငျ့ထိုငျစပွေီး ဒီတဈခါ ကိုအောငျကို ကြောပေးပွီး
ဖငျထဲလီးကိုထညျ့ခိုငျး ကိုဇျောကိုကြ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး စောကျဖုတျထဲလီးထညျ့ခိုငျးပွီး လိုးခိုငျးလိုကျတယျ လီးနှဈခြောငျးတှငျ ကိုဇျောဖငျလိုးတုနျးက ခံနိုငျသျောလညျး ကိုအောငျလိုးတော့ နညျးနညျးကွပျသလို ကိုအောငျလီးက ကိုဇျောလီးထကျ ပိုကွီးသလို ခံစားရ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကိုအောငျကော ကိုဇျောရော စံခြိနျမှီလီးမြား ဖွဈကွသဖွငျ့ အငျကွငျးလညျး ဘယျနှခြီပွီးမှနျးမသိအောငျ ကိုပွီးနလေသေညျ ” ကဲ… ရှငျတို့နှဈယောကျ ပွီးခါနီးရငျ ပွော ဘာလုပျရမလဲဆိုတာ သိတယျနျော ကိုအောငျ” “အား… အား ငဇျောရေ ပွိုငျတူပွီးမယျဟ ပွီးရငျအထဲမှာမပနျးနဲ့ ထုတျလိုကျ”။
ကိုအောငျနှငျ့ ကိုဇျောလညျးပွိုငျတူ လီးမြားကို စှဲထုတျလိုကျပွီးနောကျ အငျကွငျးလညျး စားပှဲပျေါက ဖနျခှကျအလှတျတိလုံးကို ကောကျယူပွီး လီးနှဈခြောငျးနားတပေ့ေးလိုကျလသေညျ ကိုအောငျနဲ့ ကိုဇျောလညျး လီးတှကေို ခှကျကိုဦးတညျပွီးထုပေးလိုကျပွီး ” အား….. ထှကျပွီ” ဆိုကာ နှဈယောကျသား ပွိုငျတူ ခှကျထဲကို လီးရညျတှေ ပနျးထညျ့ပေးလိုကျသညျ အငျကွငျးလညျး လီးရညျကုနျတဲ့အထိစောငျ့ပွီး “ကဲ ရှငျတို့ ခှကျထဲကို အရကျတှထေညျ့လိုကျကြ ခြီယား လုပျကွမယျ သုံးယောကျ” ကိုအောငျနဲ့ ကိုဇျောရဲ့ အရကျထညျ့တဲ့ခှကျရယျ အငျကွငျးရဲ့ လီးရညျခှကျရယျကိုငျမွှောကျလိုကျပွီး ခြီးယား လုပျတော့အငျကွငျးတဈယောကျ ” ဝမျးစတုတျ” နျောဆိုပွီး မြားပွားလှသော လီးရညျတှကေို သောကျခလြိုကျပွီး နောကျဆုံးအလုတျကို ခကျြခငျြးမငုံသေးပဲ ပါးစပျဟပွလသေညျ
ကိုအောငျနဲ့ ကိုဇျောလညျး အရကျသောကျရမှာတောငျ မသှေ့ားကွလသေညျ ကိုဇျောလညျး တဈခုခုကို သတိရသှားပွီး ခဏဆိုကာ ဖုနျးထုတျကာ ပါးစပျထဲလီးရညျရှိနသေညျ့ပုံကို အနီးကပျ photo ရိုကျလိုကျလသေညျ ထို့နောကျ အငျကွငျးလညျး လီးရညျအားလုံးကို မွိုခလြိုကျသောအခါ ကိုဇျောက “သားကွီးရေ… မငျးမိနျးမ ဝမျးစတုတျ ကတော့ တကယျကို လကျဖြားခါရပါပတေယျ” ဟု ခြီးမှနျးလိုကျလသေညျ အငျကွငျးလညျး စဈပှဲအောငျနိုငျသော စဈသူကွီး တဈယောကျအနနေဲ့ “ကဲ.. ကိုဇျော ဒီညတော့ ဒီမှာညအိပျလိုကျတော့… ကိုအောငျကော သဘောတူလားဆိုတော့” ကိုဇျောက ကိုအောငျနဲ့ အရှကျခှကျခငျြး တိုကျပွီး “ဝမျးစတုတျ” နျောဟုပွောလိုကျလရော သုံးဦးသား ရီမောသံမြားအခနျးထဲမှာ ပြံ့လှငျ့သှားလတေော့သညျ ………… ……….. ပွီးပါပွီ။
“အဟင်း… အား… ကောင်းလိုက်တာ အောင်ရယ်…. ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေတာလဲ” တိတ်ဆိတ်သော ညနှင့် အခန်းငယ်လေးထဲတွင် ရမ္မက် သံတို့ဖြင့် လွှမ်းခြုံနေပေသည် ကိုအောင်တစ်ယောက် သူမိန်းမ အင်ကြင်းကို ကုတင်ပေါ်တွင် ပေါင်နှစ်ချောင်းဖြဲပြီး အားရပါးရနှင့်ကို စိတ်လိုလက်ရမှုတ်ပေးနေပေသည် လိင်စိတ်ကြီးသူများပီပီ အရွယ်မှာလည်း နှစ်ဆယ်ငါးပတ်ဝန်းကျင် သာဖြစ်ကြသောကြောင့် ကာမအားအကောင်းဆုံး အရွယ်လည်း ဖြစ်ကြလေသည် ကိုအောင်သည် ဝါရင့်ဘာဂျာ သမားပီပီ အမှုတ်မှာတော့ စံထားရလောက်ပေသည် ထို့အပြင် အလင်းရောင်အောက်တွင် အင်ကြင်းရဲ့ ပြောင်ရှင်းနေသော စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်း ကြီးကလည်း ကိုအောင်ရဲ့ အာရုံတွေကို နှိုးဆွနေပေသည် ” အား… ရှိ” အစေ့ကို ရေခဲချောင်း စွဲသလို စွဲစုတ်လိုက် အကွဲကြောင်းကို လျှာဖြင့် ကစားလိုက် နှင့် ဒီကြားထဲ စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ချောင်းထိုးထည့်ပြီး ဖင်ပေါက်ကို ပါ ယက်ပေးလိုက်သောအခါ
” အမလေး….. အား… ကောင်းလိုက်တာ အောင်ရယ်” ဟုငြီးငြူရသည်အထိပင် ကိုအောင်သည် သူမိန်းမအကြောင်း သူသိသည် ကာမအရသာကို တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့်ခံစားသည် ထို့ကြောင့် လင်မယား နှစ်ဦးတည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်အောင် တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်ခဲ့ကြပေသည် ယခုလည်း အိမ်ထဲမှာ အသံပေါင်းစုံကို စုံနေသည် စောက်ဖုတ်ထဲက ထုတ်လိုက်သော လက်နှစ်ချောင်းကို သူမိန်းမဆီသို့ ထိုးပေးလိုက်သော အခါ အင်ကြင်းမှာ အငမ်းမရ လက်ချောင်းများကို လီးစုတ်သလို ပြောင်အောင် စုတ်ပေးလိုက်သည် “အောင်အရှိန်မလျှော့နဲ့တော့ အင်ကြင်းပြီးတော့မယ်” ” ပြီးပြီ အား ပြီးပြီ…. သောက်လိုက် အောင်ရေ စောက်ရေတွေကို ကုန်အောင်သောက်ပေး” ကိုအောင်တစ်ယောက် ပါးစပ်ကို စောက်ဖုတ်နဲ့ ကပ်နိုင်သမျှ ကပ်ပြီး ထွက်သမျှ အရည်တွေကို တစ်စက်မကျန် စုတ်ယူမြိုချလိုက်လေသည် ” အား… ကောင်းလားမောင်” ” ကဲ… မောင်တော့ အားဆေးသောက်ပြီး သွားပြီ” ကိုအောင်ရဲ့ လီးကြီးမှာ ဒုံးပျံအလား ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ထောင်မတ်နေပေသည်။
” ဟင်း… ဒါပဲသွား…. စောက်ရည်ဝင်တာနဲ့ သူဟာကြီးက ကြောက်စရာကြီး…” ပြောလည်း ပြောရင်း အင်ကြင်းတစ်ယောက် ကိုအောင်ကို တွန်းထုတ်ရင်း ပက်လက်လှန်စေကာ စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲပြီး ထိုင်ချလိုက်သည် ” အား.. ကျွတ်ကျွတ်” ဒီတစ်ခါတော့ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူအော်မိတာပါ ” ဖတ်… ဖတ်” အင်ကြင်းလည်း ကိုအောင်လက်နှစ်ဖက်ကို နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်စေကာ အားရပါးရ ကိုကိုင် စောင့်နေတော့သည် စောက်ပတ်မှာလည်း စောက်ရေတွေနဲ့ အတူတူ အဝင်အထွက်လည်း တော်တော်ချောမွေ့နေပြီး အသံတွေလည်း ဆူညံနေပေသည် ကိုအောင့်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ကော့ကာကော့ကာ ဆောင့်ပေးနေခြင်းကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် နို့ကြီးနှစ်ဖက်မှာလည်း ကိုအောင်ရဲ့ကာမသွေးတို့ကို နိုးကြွစေလေသည် ” အား…. အား ” ရုတ်တရက် အရှိန်ရလာပြီးသောအခါ အင်ကြင်းတစ်ယောက် လီးကို စောက်ဖုတ်မှ ချွတ်ရင်း ဖင်ဝကို ပြောင်းတေ့လိုက်လေသည်
ကိုအောင်တစ်ယောက် သူမိန်းမကို အဲလောက်နှာထလိမ်.မယ်လို့ တစ်ခါမှမတွေးခဲ့ဘူးပါ ညားခါစတစ်လ လောက်ထိက ဘာဆို ဘာမှမသိ နောက်ပိုင်း သူကိုတိုင်ပင် သူမိန်းမကို အပြာကားတွေ ကြည့်စေ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်စေပြီး နောက်မှစလို့ အင်ကြင်းတစ်ယောက် စကေးတက်လာချက်က နောက်ဆုံး ဆရာထက် သားတစ်လ ကြီးသွားတဲ့ အထိပေ ယခုလည်း ကြည့် ကိုအောင်ရဲ့ တံတွေးတွေနဲ့ စိုရွှဲနေတဲ့ ဖင်ကြားထဲကို လီးကိုထောက်ပြီး အားရပါးရ ထိုင်ချပြီး ကညော့နေပေသည် ” အား… ကိုအောင် အဲမှာလီးဇိမ်ခံမနေနဲ့ နို့ကိုပွတ်ပေးဦး” ဆိုပြီး အားယားပါးရဆောင့်နေ တကယ်တော့ အင်ကြင်းတစ်ယောက်လည်း ဖင်ခံဖူးတဲ့ အချိန်ကစလို့ ညတိုင်း ဖင်မခံရရင် မနေနိုင်ရတော့တဲ့ အထိပေ အရှိန်ရလာတော့ ကိုအောင်ကော အင်ကြင်းကော ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်လာသည်
ကိုအောင်တစ်ယောက်လည်း အင်ကြင်းဖင်က ဆွဲညစ်ထားလို့ အရမ်းပြီးချင်ချင်ဖြစ်လာသဖြင့် တောင်တွေး မြောက်တွေး နို့ကို အားရုံလွှဲလိုက် အသက်ရှုသံ မှတ်လိုက်နှင့် အာရုံလွှဲနေရသည် “ကိုအောင်… မေ့ကို ဒေါဂီ ဆွဲပေးဦး” ကိုအောင်လည်း လီးကိုဖင်မှဆွဲ ထုတ် အသက်ကိုဝအောင်ရှုပြီး အင်ကြင်းကို ခါးကုန်းစေကာ နောက်မှနေရာဝင်ယူပြီး ” ဘယ်ကိုသွင်းရမလဲ… ဖင်လား အဖုတ်လား” ” အဖုတ်ကိုပဲ သွင်းတော့ အောင် ရှင့်လီးက ကြီးကကြီးနဲ့ ဖင်က ဒီလောက်ဆို တော်လောက်ပြီ”။
ကိုအောင် တစ်ယောက် စောက်ဖုတ်ထဲထည့်… စိမ်ပြီး မွှေ… အားနဲ့ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်သည် ” အား… ကောင်းလိုက်တာ… အား” အင်ကြင်းက လည်ပြန်နမ်းချင်လာတာကြောင့် ဇက်ကို လှည့်လိုက်ပြီး ကိုအောင်နှင့် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းရှုံ.လိုက်သည် ကိုအောင်လည်း အားနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေရင်း အင်ကြင်းတစ်ယောက်ပြီးချင်လာသည် ” ကိုအောင် ထိန်းထား….. အင်ကြင်းပြီးပြီ” အော်ရင်းနှင့်ပင် အင်ကြင်းတစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်ပြီး ပြီးသွားပေးသည် ” အား….. ကောင်းလိုက်တာ ကိုအောင်ရယ် ကဲကိုအောင်ပြီးခါနီးရင် ပြောနော် မိန်းမဘယ်လိုပြီးစေချင်တာ သိတယ်မလား” သိပ်သိတာပေါ့…. ကိုအောင်တစ်ယောက် …. ဒီအကွက်ကို ဂျပန်ကားတွေကို ကြည့်ပြီး သူမိန်းမကို သင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်
စစချင်းတော့ တော်တော် သင်လိုက်ရပေမဲ့ နောက်တော့ သူမိန်းမအကြိုက်ဖြစ်သွားပေသည် “ကဲ… မိန်းမရေ ကိုပြီးပြီ” ဆိုပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပေသည် အင်ကြင်းလည်း ကုတင်ဘေးက စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားသည့် ကိုအောင်သောက်လက်စ ဖန်ခွက်ထဲက အရက်ကို အကုန်မော့ချလိုက်ပြီး မြန်မြန်လေး ဒူးထောက်လိုက်ပြီး ကိုအောင်လီးဒစ်နားမှာ ခွက်ကို ထားပီး လျှာလေးတစ်ကာ ကိုအောင်ကို မော့ကြည့်နေပေသည် ကိုအောင်လည်း လီးကိုခပ်သွက်သွက်လေးထုလိုက်ပြီး ” အား… အား.. မိန်းမရေ ခံထားတော့”အော်လိုက်ကာ လရည်တွေကို အရက်ခွက်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်သည် ကိုအောင်ကြီး ကြီးမားလှသော လီးကြီးမှ လရည်များ ထွက်လာပုံမှာ
မီးတောင်မှ ချော်ရည်များပန်းထွက်လာသည့်နှယ် လရည်များကလည်း ကိုအောင်ရဲ့ ကြီးမားလှသော လီးနဲ့ညီမျှလှအောင် များပြားလွန်းလှပေးသည် ” အား.. ” ကိုအောင်တစ်ယောက် ဒူးများပင် ယိုင်ချင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားပေသည် အင်ကြင်းကတော့ သူလိုချင်တာရတဲ့ ခလေးတစ်ယောက်လို ပျော်မြူးနေပေသည် လီးမှ တွဲကျနေသော လီးရည်တစ်စက် နှစ်စက်ကို နှမြောသည့်အလား ခွက်စောင်းပေါ် လီးကိုကိုင်ပြီး ရိုက်ရိုက်ချပေးနေသည် ထို့နောက် ” ဒီမှာ ကြည့်စမ်း… ကိုအောင်” ဆိုပြီး ဖန်ခွက်ထဲက လီးရည်ကို အရင်လျှာနှင့်တို့ပြသည် လက်ညိုးနှင့်ယူပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်က ပူပေါင်းလုပ်ကာစော့ပြသည်။
အားရတော့မှ ဒီမှာ ဆိုပြီး ဖန်ခွက်ကို တေ့ခါ တစ်ကြိုက်တည်း လီးရည်များကို ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ချက်ချင်း မြိုမချသေး ငုံထားပြီး ကိုအောင်အား ပါးစပ်ဟပြသည် ထို့နောက် “ဂလု” ဟုအသံပြုကာ မက်မက်မောမော မြိုချလိုက်သည် ” အား….. ကောင်းလိုက်တာ ကိုအောင်ရယ် အရသာရှိသွားတာပဲ ဒါပေမဲ့ ကိုအောင်လီးရည်တွေ နည်းနည်းငြီနေတယ် အချိုအရသာပေါ်အောင် နောက်နေ့ကျ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများချက်ကျွေးရမယ်” ဟုပြောနေရင်း ခွက်ထဲမှ လက်ကျန်လီးရည်များကို လက်ညိုးဖြင့် နှိုက်ကာ ပါးစပ်ထဲအရသာခံထည့်နေသည် ကိုအောင်လည်း ဒီလိုစိတ်ကြိုက်ကုန်းပေးတဲ့ ဇနီးချောလေးကို ချစ်မိရတာ အခါခါပင် ” အေးပါ မိန်းမရယ် နောက်နေ့ကျ လီးရည်ချိုအောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပိုစားပါမယ် ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ခေါက်တွေကျ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ပြီးကြရအောင်ကွာ ကိုတို့လည်း ကလေးယူကြရအောင်”
” အို…. ကိုကလဲ အင်ကြင်းမယူချင်သေးပါဘူး အင်ကြင်းcompany ကလည်း အခုမှအရှိန်ယူစပဲ ရှိသေးတယ် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆို ကလေးကို ကောင်းကောင်းလဲ ကြည့်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ပြီးတော့ အင်ကြင်းလည်း တစ်ရက်တစ်ရက်မှ လီးရည်အရသာမခံရရင် တစ်ခုခုလိုနေသလို အားမရှိသလိုလိုနဲ့ ကိုအောင်နော် လူကို သူပဲလီးရည်စွဲအောင် လုပ်ထားပြီးတော့ ခုမှလီးရည်ဖျက်ခိုင်းနေတယ်…. သွား…. နောက်တစ်ခါ သုတ်ရည်ပေးမသောက်ရင် လာမလိုးနဲ့” ဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးကာ ကလေးတစ်ယောက်လို နွဲ့ဆိုးဆိုးပြနေပေသည်
“ကဲပါ… မိန်းမရယ်… မင်းသဘောပါ…. မင်းမကြိုက်ရင် နောက်မပြောတော့ မလုပ်တော့ပါဘူး စိတ်ဆိုးပြေတော့နော်” ဟုချော့ပြီး ချစ်ဇနီးကို ဆွဲလှည့်ကာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားလိုက်လေတော့သည် “ဟေ့ကောင် မင်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ” ကိုအောင်မှကိုဇော်ကိုမေးလိုက်လေသည် ကိုဇော်နှင့် ကိုအောင်သည်Uni ထဲက same batch သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြလေသည် GTU မှပြီးကြသူများဖြစ်ပြီး company တစ်ခုတည်းတွင် အတူတူဝင်လျှောက် အတူတူအလုပ်ရပြီး ဆောက်လုပ်ရေးengineer များအဖြစ် အသက်မွေးနေကြလေသည်။
သူတို့နှစ်ဦးမှာ ညီအစ်ကို ကဲ့သို့ပင် တစ်ပူးပူး တစ်တွဲတွဲ နှင့် သံယောဇဉ်ကြီးကြပေသည် မတူတာ တစ်ချက်ပဲ ရှိသည် ကိုဇော်မှာ ယခုထက်ထိ မိန်းမမရသေးသော လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည် အလုပ်ပြီးသေးလျှင် အိမ်တန်း မပြန်ကြပဲ နေ့တိုင်းနီးပါး ဘီယာ ဆိုင် အရက်ဆိုင် ထိုင်ပြီး ထွေရာလေးပါ ပေါက်တက်ကရ အထူးသဖြင့် လိင်အကြောင်း စကားစမြည်ပြောတက်ကြလေသည် အချင်းချင်းရှိတာလေးတွေ မျှဝေပြီး zapya နဲ့ထိုင်ကူး ထိုင်share တက်ကြသည် ယနေ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မျက်နှာညိုးသည်ကို ကိုအောင် သတိထားမိလေသည် ” သားကြီး ဒီလိုကွာ…… ငါကွာ ငါဒီတစ်သက် အိမ်ထောင်ရေးကံပါမယ်မထင်ဘူးကွာ” “ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကွ… မင်းချိန်နေတဲ့ မေနှင်းကကော… ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့လဲ”
“အဆင်မပြေဘူးကွာ….. သူငယ်ချင်း.. ငါ့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးတဲ့… အဓိကကတော့ ကောင်မလေးက ငါ့ထက် အသက်ငယ်နေတယ်ကွာ… ငါမှားသွားတယ်…သားကြီးရာ ကျောင်းတုန်းကလည်း…. ဘဝကျင်ဖော်မရှာပဲ စာမှစာပဲ လုပ်ခဲ့ …. အလုပ်ထဲရောက်တော့လည်း….. ပိုက်ဆံပဲ ကုန်းရုံးရှာ…. သူငယ်ချင်းတွေ မိန်းမရတော့မှပဲ…. သွေးသားက တောင့်တလိုချင်လာ… တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ကာမအရသာကို ဘဝမှာ တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့်ခံစားချင်တယ်ကွာ…..ဖာချတော့လည်း မသန့်တော့ မမှုတ်ရဲ အစွပ်လေးနဲ့ချရတာလည်း ကြာတော့ ဖီး မလာချင်တော့… အဲလိုကြီးနဲ့ ဘဝဆုံးသွားမှာလည်း ဆိုးကွာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ဘဝမှာ ကာမအရသာကို စိတ်ကူးရှိသလို စိတ်လွတ်လက်လွတ် ခံစားလိုက်ချင်တယ်ကွာ” ဆိုပြီး ကိုဇော်တစ်ယောက် ရေပင်မရောတော့ အရက်ကို တစ်ကြိုက်တည်းမော့ချလိုက်လေတော့သည်။
ကိုအောင်စိတ်ထဲတွင်တော့” ငါ့သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာသာ စိတ်ထဲတွေးနေပေတော့သည်။””အား… ပြီးပြီ မိန်းမ” ထုံးစံအတိုင်း ပြီးခါနီးတော့ အင်ကြင်းတစ်ယောက် ဒူးထောက် လျှာလေးထုတ်ပြီး သူအတွက် ဆုလာဒ်ကို စောင့်မျှော်နေပေသည် ” အား” ကိုအောင်တစ်ယောက် လျှာပေါ်ကို လရည်တွေအဖွေးသား ဂွေးထုချပေးလိုက်ပြီး မျက်နှာပေါ်ကိုလည်း ခပ်စပ်စပ်လေး လီးနှင့်ရိုက်လိုက်သည် အင်ကြင်းတစ်ယောက် လီးရည်အားလုံးကို မမြိုချသေးပဲ ပါးစပ်ဟပြလိုက် အရသာခံပြလိုက် လုပ်နေပြီးမှ လီးရည်ကို မြိုချလိုက်ပြီး မျက်နှာပေါ်တွင်ပေနေသော လီးရည်များကို လက်ညိုးနှင့် သုတ်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်ရက်လိုက်သည် “ကောင်းလားမိန်းမ” “အင်း… အရသာရှိတယ်… ချိုနေတာပဲ… ဒီတစ်ခေါက်တော့” ” မိန်းမ… တစ်ခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ လိုးချင်လား” “ဘာ… ဘယ်လို ဘာပြောလိုက်တာ”
” ဪ….. ကိုမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားလူနဲ့လိုးချင်လား ကိုကို့ရိုးသွားနေပြီလား” “ရှင်… ကျွန်မကို ဘယ်လိုအစားထဲက မှတ်နေလို့လဲ ကိုအောင် ကျွန်မဘာသာ ကျွန်မ ခင်ပွန်းနဲ့ အပေါက်စုံအောင် ခံမယ် အဲလောက်တော့ နှာမထဘူး ကြည့်ရတာ ရှင်ကျွန်မကို သံသယ ဝင်နေတာလား” “အဲလိုမဟုတ်ဘူးကွ…..ကိုဆိုလိုရင်းက….. ကို့သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ကွာ…. ဒီကောင် အခုထက်ထိ မိန်းမကလည်း မရသေး ဖာချဖို့ကျတော့လည်း အေ ကြောက်ကာမအရသာကို ဘာမှန်းကောင်းကောင်းကြီး မသိသေးဘူးကွာ ကိုချင်းစာတယ် အစ်ကို အဲဒါသူကို မိန်းမနဲ့ အတူနေ….”
” တော်တော့ ကိုအောင် ရှင်ကျွန်မကို ဖာသည်များ မှတ်နေလား… ရှင်ဘယ်လိုလောက်ထိ ကို့မိန်းမကို သူများနဲ့ပေးနေဖို့ တွေးရဲရတာလဲ… တော်တော့ ရှင်ဆက်မပြောနဲ့တော့…. ဒီညတော့ ရှင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သွားအိပ် ကျွန်မနဲ့လာမအိပ်နဲ့” ဆိုပြီး ကိုအောင်ကို လီးတန်းလန်းကြီးနဲ့ အခန်းအပြင်ကို တွန်းထုတ် တံခါးကို ဆောင့်ပြီး ပိတ် ဆိုဖာ ပေါ်မှာဒီညတော့ အိပ်ရုံကလွဲလို့ မတတ်နိုင်တော့ အင်ကြင်းသည် Diamond Company မှာ GM အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည်။
တကယ်တော့ အင်ကြင်းသည် ချမ်းသာသော မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသောကြောင့် ယခုလည်း ဖခင်ပိုင်သော company မှာသာ ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်ပေသည် ယခုလည်း အလုပ်ပါးသောကြောင့် အလုပ်တွင် ပျင်းပျင်းရှိသည်နှင့် ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီး fb profile change မည်ဟုကြံကာ gallery ထဲသို့အသွား အပြာကား အသစ်များကို တွေ့လိုက်သဖြင့် မျက်လုံးပြူးသွားသည် “အင်း… ကိုနိုင်တစ်ယောက်လက်ချက်ပဲ နေမှာပါပဲ” မနေ့ညက စကားကတောက်ကဆ များထားသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စကားမပြောပဲ အလုပ်ထွက်လာကြပြီး သူမသိသော အချိန် ကိုနိုင်တစ်ယောက် ထည့်လိုက်ပုံရသည် ရုံးခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းလည်းရှိနေသောကြောင့်
စိတ်လုံအောင် ဘေးဘီဝဲယာကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး အင်ကြင်းတစ်ယောက် အောဇတ်ကား များကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည် ကားများမှာ ဇာတ်လမ်းသွားလေးများ ဖြစ်ပြီး အဓိကကတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မိန်းမဖလယ်လိုး နှင့် သူငယ်ချင်းမိန်းမကို ပြိုင်တူချကြတာချည်းတွေဖြစ်နေသည် အင်ကြင်းလည်း စိတ်ပါလာပြီး အဆုံးထိထိုင်ကြည့်ဖြစ်ရင်း ဆီယူကလောက် ဆိုသော စာတန်းလေးများကိုတွေ့ပြီး internet မှာချက်ချင်းရှာကာ ရုပ်ရှင်များ down လိုက်လေသည် ထို့နောက် မထိန်းနိုင်တော့သည်
အဆုံး အိမ်သာဘက်သို့ ထွက်သွားပြီး အဖုတ်ကို အားရပွတ်ပြီး စောက်ရည်ထွက်မှပဲ ပြီးသွားတော့ပေသည်.. ပြန်ရောက်တော့ အင်ကြင်းတစ်ယောက် ကိုအောင်နှင့် စကားမပြော အခန်းထဲဝင်ပြီး ကလောက်အိုး အကြောင်း internet အပေါ်မှာ စူးစမ်းလိုက်ရှာကြည့်သည် လျှောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကလောက်ဆိုသည်မှာ သူထင်ထားသကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ အိမ်ထောင်ရေးပြသနာအများစု မဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းသော အရာမှန်းနားလည်လာသည်။
အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲစေသည့် အရာမဟုတ်ပဲ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုခိုင်မြဲစေသည့် အရာမှန်း ပိုသဘောပေါက်လာသည် အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက ယခုအချိန်ထိ ခင်ပွန်းနှင့်သာ အတူတူနေဖူးသော မိမိမှာလည်း အခြားအတွေ့အကြုံ အသစ်အဆန်းများ လိုချင်သော လိုအင်များလည်း တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာလေသည် ………. ” ကိုအောင်” ” ပြောလေ… အင်ကြင်း ကိုကို့ စိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲလား” ” ရှင့်သူငယ်ချင်းက သန့်လို့လား” “မိန်းမ မင်းဘာပြောလိုက်တယ်” “မေးနေတာ… ရှင့်သူငယ်ချင်းက သန့်လို့လား” “သန့်တာမှာ ရေတောင်ဆေးစရာမလိုဘူး… ဒါဆို မင်းသဘောတူလိုက်ပြီပေါ့” “သွားပါ…… ကို့မိန်းမကို တန်ဖိုးမထားတဲ့လူ…… ကဲ… ကျွန်မကို အားဆေးတိုက်ဦး… မသောက်ရတာ သုံးရက်တောင် ရှိပြီ”
” အင်းပေါ့…. မိန်းမရာ တိုက်ရမှာပေါ့”ဆိုပြီး ဘောင်းဘီဆွဲချွတ်ပြီး လီးကို အင်ကြင်းမျက်နှာနားကို တိုးပေးလိုက်လေတော့သည်……. ဒီနေ့ အင်ကြင်းတစ်ယောက် အလှဆုံး ပြင်ထားသည် အတွေ့အကြုံအသင့်အတွက်ရင်တွေလည်း ခုန်နေသည် စောက်ဖုတ်ကိုလည်း သေသေချာချာရေဆေး အမွှေးရိတ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီး ဆက်ဆီ ကျအောင် စကတ်အတိုလေးနှင့် လည်ဟိုက်ဝတ်ပြီး ဆိုဖာ ပေါ်မှာ ထိုင်စောင့်နေပေသည် စကတ်မှာလည်း စောက်ပတ်မပေါ်ရုံတမယ်ပင်အောက်တွင်ပင်တီ ဝတ်မထား နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာလည်း ဘော်လီမဝတ်ထွားသဖြင့် ကြည့်ရသူအပေါင်း အမြင်နှင့်တင် တစ်ချီပြီးသွားနိုင်ပေသည်
ထိုအချိန်တွင် ခြံရှေ့မှာ ကားသံကြားရ သည်နှင့် ဝမ်းသာသွားသည် ကိုဇော်နှင့် ကိုအောင်တို့ရောက်လာကြပြီပဲ တကယ်တော့ ကိုဇော်နှင့် အင်ကြင်းသည် အစိမ်းသက်သက်မဟုတ်ပေ ကိုဇော်သည် ကိုအောင်အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်ကိုတော့ ခဏခဏ လာဖူးနေသည် ယခုလိုမျိုး အခြေအနေတွင်တော့ ကိုဇော်ကော အင်ကြင်းကော စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေမည်မှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်သည်။
အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး ထွက်ကြိုလိုက်တော့ ကိုဇော်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျွတ်ကြမတတ်ပင် ဧည့်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားပြီး အရက်ဝိုင်းနှင့် အမြည်းပြင်ပေးထားသော စားပွဲဘေးနားရှိ ဆိုဖာ ပေါ်မှာ အသီးသီးနေရာယူလိုက်ကြသည် ကိုအောင်က” အင်ကြင်းရေ အစ်ကိုဘဲကင်လေးပါ ဝယ်လာတယ် ဒါလေးလည်း ပြင်ပေးလိုက်ပါဦး” ” ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို” ဆိုပြီး အင်ကြင်းတစ်ယောက် kitchen ဘက်ကို လှည့်ထွက်သွားပါတယ် အဲအချိန်မှာ ကိုဇော်တစ်ယောက် “ဟေ့ကောင် မင်းမိန်းမက ဖြစ်ပါ့မလား” ဟုဆိုရာ ကိုအောင်က “ငါကတောင် ရပါတယ် ဆိုနေ မင်းကဘာဖြစ်နေတာလည်း ယောက်ျားမဟုတ်သလိုပဲ” ဟုငေါက်လိုက်တော့မှ ငြိမ်ကျသွားသည်
ထို့နောက် ကိုအောင်လည်း ဧည့်ခန်းထဲရှိ TV ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ညကdown ထားသော ဇာတ်ကားတစ်ကားကို စဖွင့်လိုက်သည် ထိုအချိန်တွင် အင်ကြင်းလည်း ပြန်ရောက်လာပြီး ” ဟွန်း… ကိုအောင်တော့များ လောလိုက်တာ အေးအေးဆေးဆေးနားပါစေဦးလား ဧည့်သည်ကို အားနာစရာကြီး” “အားနာစရာမလိုဘူး ဧည့်သည်က အဲလိုကို မစောင့်ချင်တော့ဘူး” ပြောပြီး မိန်းမကိုပွတ်သီးပွတ်သပ် လုပ်ပြနေလေတော့သည်
“ဟေ့ကောင်လာပါဟ ကျောက်ရုပ်ကြီးလို ငူမနေပါနဲ့” လို့ပြောပြီးကိုအောင်က လှမ်းအပြော အင်ကြင်းကတော့ ကာမဆိပ်တက်နေသော မျက်လုံးများဖြင့် ကိုဇော်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေသည် ကိုဇော်လည်း မရဲတရဲသွားပူးပေါင်းပြီး ကိုအောင်နဲ့အတူ အပေါ်ပိုင်း လည်ဟိုက်ကို စွဲချွတ်လိုက်လေသည် “မိန်းမ လက်မြှောက်ထားစမ်း” သိနေတယ်လေ အင်ကြင်းကောင်းကောင်း သိတာပေါ့ ယောက်ျားတွေဘာကြိုက်တတ်မှန်း ဒါကြောင့် ဂျိုင်းကို အပတ်တိုင်း ပေါင်းသွားတင်ပြီ အမြဲတမ်း ဖွေးနေအောင် ထားတာပေါ့ လက်မြှောက်ထားပေးတဲ့အချိန် ကိုအောင်ရော ကိုဇော်ရော ဂျိုင်းကို လျှာနဲ့အငမ်းမရ ယက်ကျပါလေရော။
ရှိန်နေတဲ့ ကိုဇော်လည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ရဲတင်းစ ပြုလာသလို အင်ကြင်းခံစားလာရတယ် “ပလပ်.. ပလပ်” ” အင်း…..” ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖီလင် အင်ကြင်းတစ်ယောက် ကျားနှစ်ယောက်နဲ့ အဲလိုခံစားလိုက်ရတော့ ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ် ကိုအောင်တစ်ယောက် စကပ် ကိုချွတ်မလို့အလုပ် “မချွတ်နဲ့ကိုအောင်”ဆိုပြီး ပေါင်ကားပေးလိုက်တော့ စကပ် ကြားထဲကနေ စောက်ဖောက်ကြီး ပြူးနေအောင် ထွက်လာလေသည် “Wow လှလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်” ကိုဇော်တစ်ယောက် ကန့်သတ်ချက်တွေကို လုံးဝကို ချိုးဖျက်ပစ်လိုက်တော့သည်
” အင်ကြင်း… အဲစောက်ပတ် ကိုဇော်ကိုပေးယက်ကွာ” ဆိုပြီး ပက်လက်လှန်ချလိုက်တော့ အင်ကြင်းတစ်ယောက် သူမျက်နှာပေါ်တက်ခွပြီး ကိုအောင်ကို တစ်ဖက်က လီးစုပ်ပေးနေလိုက်သည် အင်ကြင်းတစ်ယောက် အကောင်းကြီးကောင်းနေလေသည် ” အင်ကြင်း… ပြီးအောင်ပွတ်နော် ကိုဇော်စောက်ရည်သောက်ချင်လို့” Ok လေ ကြိုက်ပြီပေါ့ အင်ကြင်းတို့ နဂိုကတည်းကမှ အကောင်းကြီး ကောင်းနေတဲ့ အင်ကြင်းတစ်ယောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အချီကြီးပြီးသွားလေသည် စောက်ရည်မှာလည်း တာတမန် ကလွှတ်လိုက်တဲ့ ရေတွေအလား
ကိုဇော်ပါးစပ်ထဲကို တရဟော ကျသွားလေသည် ကိုဇော်ကလည်း တစ်စက်မှ အလေအလွင့်မရှိစေချင်သည့် အလား အကုန်လုံးကို မြိုချရင်း နောက်ဆုံးအလုတ်ကို ပါးစောင်ထဲထည့် အရသာခံပြီးတော့မှ ဖြေးဖြေးချင်း မျိုချလိုက်လေသည် အင်ကြင်းလည်း ပါးစပ်ထဲမှာလီးကိုချွတ်ပြီး “ကောင်းလား… ကိုဇော်” “ကောင်းလိုက်တာ ဘီယာ နဲ့တောင်မလဲနိုင်ဘူး စောက်ရည်ကို အခုမှ ပထမဦးဆုံးသောက်ဖူးတာ ကဲကို့ကိုလည်း လီးစုပ်ပေးပါဦး” “အင်း… ” ဆိုပြီး အင်ကြင်းတစ်ယောက် ကိုဇော်ရှေ့ ဒူးထောက်ပြီး လီးကိုကုန်းမှုတ်ပေးနေတုန်း နောက်က ကိုအောင်က တင်နှစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီး စောင့်လိုးနေပေတော့သည်။
” အား…” ကိုဇော်တစ်ယောက်လည်း အင်ကြင်းခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီး အကောင်းကြီးကောင်းနေပေတော့သည် အင်ကြင်းလည်း ပါးစပ်ကနေတောင် မအော်အား လီးနဲ့ပါးစပ်မှာအစို့ခံထားရပြီး ကိုအောင်ကလည်း နောက်မှ သားအိမ်ထောက်လောက်အောင် သည်းကြီးမည်းကြီး စောင့်ထည့်နေသည် “အား… ကောင်းတယ်ကွာ…. ပြီးသွားလိမ်.မယ် ဒီအတိုင်းဆို ပါးစပ်ထဲမှာ” “ပြီးလိုက် ကိုဇော် ကိုဇော် ပါးစပ်ထဲမပြီးတောင် စိတ်ဆိုးမှာ အင်ကြင်းက လီးရည်သောက်ချင်တာ” ” ဪ… ကြိုက်သွားပြီ ပြီးမှာတိုက်မယ် ကိုဇော်အရင်လိုးပါရစေဦး” ဆိုပြီး အင်ကြင်းဖင်နောက်ကိုသွားပြီး ကိုအောင်ကို အင်ကြင်းအောက်ဝင်စေပြီး လီးကိုစောက်ပတ်ထဲထည့်ပြီး သူကိုတိုင်က လီးကို ဖင်ကြားထဲထည့်ပြီး ညောင့်နေလေရဲ့
“အား….” ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖီလင် ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲ မြင်ဘူးသလောက် အပြင်မှာ တယ်ကောင်းတဲ့ ဖီလင် မျိုးပါလား ကျားနှစ်ယောက် ညပ်ချတာလောက် ကောင်းတာမရှိတော့ တစ်ယောက်ကဖင်ကိုလိုး တစ်ယောက်က စောက်ဖုတ်ကိုလိုး တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့်နဲ့ ကောင်းလွန်းလို့ စိတ်ရှိလက်ရှိ အင်ကြင်းတစ်ယောက်အော်မိသည် သုံးယောက်သား ချွေးတွေတဒီးဒီးကြအောင် ကာမအရသာခံစားပြီး ကိုအောင်က ပိုဇေရှင် ပြောင်းမည်ဆိုသဖြင့် အင်ကြင်းကို စောင့်စောင့်ထိုင်စေပြီး ဒီတစ်ခါ ကိုအောင်ကို ကျောပေးပြီး
ဖင်ထဲလီးကိုထည့်ခိုင်း ကိုဇော်ကိုကျ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲလီးထည့်ခိုင်းပြီး လိုးခိုင်းလိုက်တယ် လီးနှစ်ချောင်းတွင် ကိုဇော်ဖင်လိုးတုန်းက ခံနိုင်သော်လည်း ကိုအောင်လိုးတော့ နည်းနည်းကြပ်သလို ကိုအောင်လီးက ကိုဇော်လီးထက် ပိုကြီးသလို ခံစားရ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုအောင်ကော ကိုဇော်ရော စံချိန်မှီလီးများ ဖြစ်ကြသဖြင့် အင်ကြင်းလည်း ဘယ်နှချီပြီးမှန်းမသိအောင် ကိုပြီးနေလေသည် ” ကဲ… ရှင်တို့နှစ်ယောက် ပြီးခါနီးရင် ပြော ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိတယ်နော် ကိုအောင်” “အား… အား ငဇော်ရေ ပြိုင်တူပြီးမယ်ဟ ပြီးရင်အထဲမှာမပန်းနဲ့ ထုတ်လိုက်”။
ကိုအောင်နှင့် ကိုဇော်လည်းပြိုင်တူ လီးများကို စွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက် အင်ကြင်းလည်း စားပွဲပေါ်က ဖန်ခွက်အလွတ်တိလုံးကို ကောက်ယူပြီး လီးနှစ်ချောင်းနားတေ့ပေးလိုက်လေသည် ကိုအောင်နဲ့ ကိုဇော်လည်း လီးတွေကို ခွက်ကိုဦးတည်ပြီးထုပေးလိုက်ပြီး ” အား….. ထွက်ပြီ” ဆိုကာ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ ခွက်ထဲကို လီးရည်တွေ ပန်းထည့်ပေးလိုက်သည် အင်ကြင်းလည်း လီးရည်ကုန်တဲ့အထိစောင့်ပြီး “ကဲ ရှင်တို့ ခွက်ထဲကို အရက်တွေထည့်လိုက်ကျ ချီယား လုပ်ကြမယ် သုံးယောက်” ကိုအောင်နဲ့ ကိုဇော်ရဲ့ အရက်ထည့်တဲ့ခွက်ရယ် အင်ကြင်းရဲ့ လီးရည်ခွက်ရယ်ကိုင်မြှောက်လိုက်ပြီး ချီးယား လုပ်တော့အင်ကြင်းတစ်ယောက် ” ဝမ်းစတုတ်” နော်ဆိုပြီး များပြားလှသော လီးရည်တွေကို သောက်ချလိုက်ပြီး နောက်ဆုံးအလုတ်ကို ချက်ချင်းမငုံသေးပဲ ပါးစပ်ဟပြလေသည်
ကိုအောင်နဲ့ ကိုဇော်လည်း အရက်သောက်ရမှာတောင် မေ့သွားကြလေသည် ကိုဇော်လည်း တစ်ခုခုကို သတိရသွားပြီး ခဏဆိုကာ ဖုန်းထုတ်ကာ ပါးစပ်ထဲလီးရည်ရှိနေသည့်ပုံကို အနီးကပ် photo ရိုက်လိုက်လေသည် ထို့နောက် အင်ကြင်းလည်း လီးရည်အားလုံးကို မြိုချလိုက်သောအခါ ကိုဇော်က “သားကြီးရေ… မင်းမိန်းမ ဝမ်းစတုတ် ကတော့ တကယ်ကို လက်ဖျားခါရပါပေတယ်” ဟု ချီးမွန်းလိုက်လေသည် အင်ကြင်းလည်း စစ်ပွဲအောင်နိုင်သော စစ်သူကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ “ကဲ.. ကိုဇော် ဒီညတော့ ဒီမှာညအိပ်လိုက်တော့… ကိုအောင်ကော သဘောတူလားဆိုတော့” ကိုဇော်က ကိုအောင်နဲ့ အရွက်ခွက်ချင်း တိုက်ပြီး “ဝမ်းစတုတ်” နော်ဟုပြောလိုက်လေရာ သုံးဦးသား ရီမောသံများအခန်းထဲမှာ ပျံ့လွင့်သွားလေတော့သည် ………… ……….. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လကျဖြားခါရတယျ